Kubadda Cagta: isweydaarsi fiat & wadaag. Abaalmarinta barkadda: 50.000 BUSD oo leh Binance - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Kubadda Cagta: isweydaarsi fiat & wadaag. Abaalmarinta barkadda: 50.000 BUSD oo leh Binance
Tag: Binance, Horyaalka Kubadda Cagta, Barkadda abaalmarinta
TL: DR Binance wuxuu bilaabay tartan cusub, Horyaalka Kubadda Cagta. Qofka ganacsiga ugu badan sameeyaa wuxuu ku guuleystaa BASDKA ugu badan.
Si loogu dabbaaldego finalka Copa America iyo EURO Cup, iyo sidoo kale ruuxa tartanka kubbadda cagta, Binance wuxuu billaabayaa tartan ganacsi oo fiat ah oo abaalmarin lagu siinayo 50.000 BUSD.
Ma xiisaynaysaa inaad ka qaybgasho? Hagaag, aad u taxaddar. Wax kasta oo aad halkan ka aqriso shaqo kuma lahan talobixin maaliyadeed, waa uun xisaabaad run ah. Binance ayaa waxan sameeya. Xusuusnow in ganacsigu aad khatar u yahay.
Laga bilaabo 2021-07-06 09:00 AM (UTC) ilaa 2021-07-12 11:59 PM (UTC)
Dhamaan VIP 0 (inteena badan) iyo VIP 1 isticmaaleyaasha oo si guul leh u dhammeeya dhammaan howlaha soo socda waxay si siman u wadaagi doonaan abaalmarin abaalmarin ah 10.000 BUSD:
Ganacsi ugu yaraan $ 200 gudaha BRL, EUR ama RUB
Muuji kaqeybgalkaaga adigoo soo gudbinaya Binance UID qaybtan
Kaqeybgalayaasha ugu sareeya ee uqalma 10.000 ee kujira waqtiga gudbinta Binance UID-yada waxay heli doonaan 1 BUSD midkiiba. Haddii ay jiraan wax kayar 10.000 oo kaqeybgalayaal uqalma, 10.000 BUSD abaalmarinta barkada ayaa looqaybin doonaa si siman.
Ganacsi badan, kasbo waxbadan
40.000 BUSD barkadda abaalmarinta waxay gaar u noqon doontaa 100-ka ganacsade ee ugu horreeya wadarta guud ee ganacsiga (oo ay ku jiraan ganacsiyada) ee EUR, RUB iyo BRL lammaanaha ganacsiga inta lagu jiro muddada tartanka.
Qeybinta abaalmarinta waxay noqon doontaa sida ku cad jadwalka hoose:
Qiimeynta isticmaalaha Riix BUSD
Ka bilow 1aad ilaa 10aad $ 18.000 * Waxaa loo qeybiyay mug
Laga soo bilaabo 11aad ilaa 50aad $ 400 midkiiba
Ka bilow 51aad ilaa 100aad $ 120 midkiiba
Shaxda abaalmarinta ee dadaalka Tartanka Kubadda Cagta ee Binance
* Abaalmarinta 10-ka guuleyste ee ugu sareysa waa loo qeybin doonaa iyadoo lagu saleynayo wadarta wadarta macaamilka ganacsi ee u dhigma wadarta guud ee mugga ganacsiga ee 10-ka isticmaale ee ugu sareysa inta lagu jiro xilliga tartanka.
Ma lihid EUR, RUB iyo BRL?
Hadaad rabto inaad aqriso pappardella, booqo bogga heegan u ah tartanka.
Maqaalka horeMuxuu yahay barnaamijka ugufiican ee lagu iibsado cryptocurrencies?
Maqaalka xigta10-ka qadaadiic ee ugu wanaagsan sirta iyo sida loo iibsado